Imiyalelo yokuHombisa iKrisimesi - Intloko
Imiyalelo yokuHombisa iKrisimesi
Ukuba uyakuthanda ukwenza ubucwebe obenziwe ngezandla obunamacwecwe ungazisebenzisa ezizakhono zinefashoni yokuhombisa iiKrisimesi ezintle. Ezi projekthi zikwabalulekile kubaqalayo, njengoko zisebenzisa iindlela ezilula kunye nokufumana izinto ezilula. Ukwenza imihombiso eyenziwe ngezandla inokuba sisiqalo sesiko losapho olonwabisayo; khetha imiyalelo eyahlukeneyo yokuhombisa imihombiso yeKrisimesi minyaka le, kungekudala uza kuba nomthi ozele ziinkumbulo ezimnandi zeKrisimesi eyadlulayo.
Iiprojekthi zeKrisimesi ezihonjisiweyo
Zonke ezi projekthi zintathu ziyakhawuleza, zilula, kwaye kufanelekile kuwo onke amanqanaba ezakhono.
Indlela yokwenza iiBhukumaka zeBeaded
Uyilo lwesongo seBead
I-Beaded Antique Key Umgexo
I-Candy Cane enobuhlalu
Le ndonga yeelekese ezimnandi izakongeza umnxeba wangoku kumthi wakho weKrisimesi. Kukwalungele ukusebenzisa ubuhlalu obushiyekileyo kwiiprojekthi zobucwebe zangaphambili.
Amaso amancinci abomvu amnyama
Amaso amancinci acacileyo amancinci
20 gauge ucingo lwesilivere
Sika intwana yocingo ene-intshi ezine kwaye wenze ilogo encinci kwelinye icala.
Umtya wamaso kwipateni ekholisayo, ukutshintshisa ubomvu kunye nokucoca ubuhlalu.
Yenza iluphu ekupheleni kocingo kwaye uyigobele kwimilo yerhasi yeelekese.
Sika isiqwenga sentambo esibhozo ukurhangqa umhombiso wozinzo olongeziweyo.
IKrisimesi yeCharm Ornament
Ubuncinane bembewu kunye ne-charm yeKrisimesi yenza lo mhlobiso olula ube yiprojekthi yeholide emnandi.
Iimbewu zeMbewu kumbala owukhethileyo
Umtsalane weKrisimesi encinci kunye nokutsiba umsesane
Sika isiqwenga sentambo ezintlanu kwaye wenze ilogo encinci kwelinye icala.
Umtya wembewu yembewu kunye nobude becingo.
Yenza iluphu ekupheleni kwecingo kwaye ujije iziphelo zombini ngokudibeneyo ukwenza isangqa.
Sika isiqwenga sentambo ukusongela umhombiso ukuze uzinze.
Sebenzisa iringi yokutsiba ukuncamathisela umtsalane embindini wesihombiso.
Isiseko seBeladed Ornament
Umhlobiso olula wobuhlalu ungagqitywa kwimizuzu eli-10 okanye ngaphantsi, okwenza le projekthi ibe yiprojekthi enkulu kubenzi bobugcisa abaxakekileyo okanye abo bafuna umbono wesipho owenziwe ngokwakho ngokukhawuleza.
Inye yebhondi ephambili enkulu
Amaso amancinanana amane ukuya kwamathandathu kwimibala yokudibanisa
Umtsalane ngendandatho yokutsiba
Uluhlu lwe-gauge ye-gauge ye-18
Sika ubude bocingo ixesha elide kunokuba ufuna ukuba umhombiso wakho ubekhona.
Goba isiphelo esinye socingo kwilogo encinci.
Namathisela umtsalane ngendandatho yokutsiba kwiluphu.
Umtya wakho weentambo kwi-wire, ugxininise ibhondi ephambili.
Sebenzisa iipilisi zakho ukwenza i-loop phezulu kwesihombo sakho.
Bopha iribhoni ngaphezulu ukuze ukwazi ukuxhoma umhombiso wakho emthini.
Ngokuxhomekeke kubukhulu beentsimbi ozisebenzisayo, unokukwazi ukutshintsha lo mhlobiso wesiseko ngokumisa i-dangle yakho yebhola kwibhola yeglasi ecacileyo.
Indawo efanelekileyo yokuthenga iwayini kwi-intanethi
Iingcebiso zokwenza imihlobiso enobuhlalu
Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zobuhle be-ornament yoyilo olukhoyo, ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukukhetha into onokuyenza kwiprojekthi yakho yobugcisa beholide. Cinga ngezi zinto njengoko uvavanya lonke ukhetho lwakho:
Uhlobo lomthi wakho weKrisimesi okanye umhombiso wasekhaya womamkeli
Ingaba okanye cha okanye umhlobiso kufuneka ube yinto ekhuselekileyo kumakhaya aneemfuyo okanye abantwana abancinci
Zeziphi izinto zokubekwa ngaphambili osele ufumene kuzo kwi-stash yakho
Lingakanani ixesha ekufuneka ugcwalise ngalo uhombiso ngalunye
Ukukhetha imibala yeBead
Imihlobiso enobuhlalu ingenziwa nakweyiphi na indibaniselwano yemibala oyikhethayo. Ukuba ufuna uncedo lokuqalisa, nayiphi na indibaniselwano elandelayo ngokuqinisekileyo inokuba yindawo efanelekileyo yoyilo loyilo:
ixabiso lokufa komhlobo
Umkhosi wamanzi kunye nesilivere
Uluhlaza lwamahlathi, i-burgundy kunye negolide
Indlovu, itan negolide
Icy eluhlaza okwesibhakabhaka, i-lilac kunye nesilivere
Impepho eluhlaza, impepho kunye neempondo zendlovu
Yenza iNkcubeko eNtsha
Njengoko ukhula ukhululekile kunye nobuchule obusetyenzisiweyo ekwenzeni imihombiso enobuhlalu, cinga ngokuxhuma kunye nokwenza izihombiso zabahlobo kunye nosapho ngokunjalo. Unokufumanisa ukuba ukwenza ezinye izinto zokuhombisa ezizodwa unyaka nonyaka iba sisiko elitsha leeholide.
Umbala Wenwle Abs And Core Workouts Engagementment Rings Slideshows Umtshato Womtshato Abantwana'ingubo Ne Nwele
Imvelaphi Endlela Namatools
yeyiphi imiqondiso ehambelana nesagittarius
Wenza ntoni umphathi werestyu
kuchaphulo olu malunga nobudlelwane babazalwana noodade
yimalini ukubonelela ngesipho sokuthweswa isidanga ekholejini
Usana Olusandul 'ukuzalwa